အဆင်မပြေရင် ပြန်ချပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အဆင်မပြေရင် ပြန်ချပါ။
Posted by phone_kyaw on Feb 3, 2012 in Copy/Paste | 27 comments
၂ဝဝ၈-အခြေခ့ ဥပဒေကို ပြင်ကြမယ်ဆိုပြီး လွှတ်တော်ထဲ ဝင်ကြမယ်။ ဘယ်တော့မှ ပြင်ပြီးမှာလဲ။ နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း ၅ဝ-၁ဝဝ လား။ ဆိုတော့ ဘယ်သူမှ အတိအကျ မသိဘူး။
သူတို့ က မတရား အာဏာယူထားတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ငါတို့ မကြိုက်ဘူး၊ အသိအမှတ်မပြုဘူး။ ဒီလိုခံစားချက်မျိူးလည်း ရှိတယ်။ ဒါလည်းမှန်တာပဲ။
လွှတ်တော်ထဲကနေ တဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးပြီး တောင်းသွားရင် တနေ့ မှာ ဖြစ်လာမယ်။ ဒါလည်းမှန်တာပဲ။
လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ၊ လူထုတိုက်ပွဲပေါင်းစပ်ပြီး ဖြိုချလိုက်ရင် အာဏာရှင်စနစ် ပြုတ်ကျပြီး အရပ်သားအစိုးရ အာဏာရလာမယ်။ ဒါလည်းမှန်တာပဲ။
အစိုးရ၊ အတိုက်အခံ၊ တိုင်းရင်းသားသူပုန်တွေ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ရင် တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းနိုင်တယ်။ တွေ့ ဆုံကြပါ။ ဒါလည်းမှန်တာပဲ။
တစ်ခုမှ လက်တွေ့ သိပ္ပံနည်းကျ အဖြေထုတ်တာ မဟုတ်ပဲ သန်ရာသန်ရာ ပြောနေ တွေးနေကြတယ်။ ဒီအခြေအနေက ကြာခဲ့ပြီ။ ဒီနေရာမှာ ကြားညပ်နေတာက ပြည်သူ။ ဟိုလူ့ က တမျိူးဆိုရင် သူတို့ လည်း တမျိူးဖြစ်ရပြန်ပြီ။ ဟိုခေါင်းဆောင်က ပြောရင် ဟိုခေါင်းဆောင်အနောက်ကို လိုက်ရပြန်ပြီ။ နောက်ဆုံးတော့ ပြည်သူလူထုက အရှုးကိုလင်လုပ်ရသလိုပဲ။ လင်တင်မဟုတ်ဘူး ထမင်းပါ ငတ်ရသေးတယ်။
ဆိုတော့ ဒီနေရာမှာ လူတိုင်းက အတွေးမျိူးစုံ လမ်းစဉ်နဲ့ ယူဆချက်မျိူးစုံ ရှိနေတယ်။ ဘယ်လမ်းကိုရွေးမှာလဲ။ ပြတ်ပြတ်သားသား မျက်စိမှိတ်ပြီး အထက်က နည်းလမ်းတစ်ခုခုကို ထောက်ခံကြဖို့ လိုပြီ။ လက်တွဲလုပ်ကြဖို့ လိုပြီ။ တကယ်လို့မလုပ်ဘူးဆိုရင် အသံစုံပြီး နားထောင်မကောင်းတဲ့ တီးဝိုင်းလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုချက်ကတော့ ပြည်သူတွေအတွက် ဘာမှ အကျိူးမရှိပဲ ပဋိပက္ခထဲမှာ ဝဲလည်ဝဲလည်နဲ့ ဖြစ်ပြီး အကြွေးက ဒေါ်လာသန်းတစ်သောင်းတင်မကဘူး သန်းတသိန်းအထိဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒိထက်ပိုပြီး ငတ်လာနိုင်တယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ မြန်မာတွေဟာ လူနဲ့ မတူတော့ပဲ တိရဆ္ဆန်ရုပ်ပေါက်တဲ့လူတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အခုလည်း ဖြစ်နေကြပြီ။ အီသီရိုးပီးယားက လူတွေကတောင် မြန်မာတွေထက် နည်းနည်းဝသေးသလားလို့ ပါ။
ခင်ဗျားတို့ တော့ မသိဘူး။ ကျနော်လိုချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်က အင်္ဂလန်နိုင်ငံ နဲ့သြစတျေးလျနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးစနစ်မျိူးကို ဗမာပြည်မှာ ဖြစ်စေချင်တယ်။ နောင်လည်း ဒီလိုဖြစ်လာအောင် လုပ်သွားအုံးမယ်။ ကျိူးစားသွားချင်တယ်လို့ ပြောတာပါ။
အခုအနေအထားအရ မြန်မာပြည်လွှတ်တော်နဲ့ အင်္ဂလန်ပါလီမန်ကိုယှဉ်ရင် ဆီနဲ့ ရေ၊ မိုးနဲ့ မြေကြီးပဲ။
နှစ်ပေါင်း ၅ဝ-ကျော်အတွင်းမှာ တိုက်ခဲ့တာ၊ အော်ခဲ့တာ၊ သေခဲ့တာ၊ ထောင်ကျခဲ့တာတွေရဲ့ တန်ဖိုးက နည်းတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရာဖြစ်ခဲ့လားဆိုတော့ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အထူးသဖြင့် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းပြောမယ်ဆိုရင် နိုင်ခဲ့လားဆိုတော့ မနိုင်ခဲ့ဘူး။
ဒီတော့ သူလည်းမနိုင် ကိုယ်လည်းမနိုင် သရေဖြစ်တဲ့ပွဲမှာ ဘာလုပ်သင့်သလဲဆိုတာကို လူကြီးမင်းတို့ အားလုံးသဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်။
ဆိုတော့ သတ္တိရှိရှိ လက်တွဲလုပ်ကြပါ။ အဆင်မပြေရင် ပြန်ချပါ။ အဆင်ပြေရင် ဆက်ပေါင်းပေါ့ဗျာ။ ဒါဆိုရင် ကြားက မြေဇာပင်က အရင်ကထက်ပိုပြီး သက်သာနိုင်တယ်။ အကုန်အကျနဲနိုင်တယ်။
အဲ့ဒါ လူ့ဘ၀ :cool:
စိန်ကောင်းကျောက်ကောင်းရောင်းတယ်။ ဆေးရိုးသည်က ကန့် လန့် မလုပ်နဲ့ ။ မကြိုက်ဘူး။
ဘယ်မှာလဲစိန် … ဘယ်မှာလဲ ကျောက် ….. ဖွတ်
ပြောတော့ မိုးလားကဲလား … ကတော့ ချိုမိုင်မိုင် …..
ဆေးရိုးတော့မရောင်းဘူး … ပဲကြီးလှော်ပဲ ရောင်းနေတယ်
ကိုဘုန်းကျော်ပြောတဲ့ထဲပါလာလို့ ၀င်ရှည်လိုက်အုံးမယ်။ မြန်မာပြည်ကြွေးက ၁၁ ဘီလီယံကျော်တယ်ဆို။ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးကို ဘယ်လောက်လောက်ကျမလဲခန့်မှန်းပေးကြပါ။ သများမမှန်းတတ်ရို့။ သများတို့လဲမသုံးရပဲနဲ့ဆပ်ရအုံးမယ်ထင်ပါရဲ့၊ ကြွေးစာရင်းတွေ ထွက်လာပြီးဆိုတော့။ အော် စုတ်ခ..စုတ်ခ.
မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်တိုင်းမှာ အကြွေးဒေါ်လာ နှစ်သောင်းဆပ်ရမယ်။ မြန်မာငွေနဲ့ ဆိုရင် သိန်းနှစ်ရာခန့် ။ ကဲ…ဘယ်လိုဆပ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြပါအုံး။ မဆပ်နိုင်ရင် အတိုးတွေ ပိမယ်။
အဘဖောပြောတော့ ၂၈ သိန်းဆို။ ဘယ့်နှယ့်ကိုဘုန်းကျော်ကျမှ သိန်း ၂၀၀ ဖြစ်ရတာတုံး။ ကြည့်လုပ်ပါအုံး။ ကျွန်မတို့ကထောက်ပံ့ကြေးမရှိဘူးလေ။ ဘယ့်နှယ့်လုပ်ပိုတင်ထားတာတုန်း။ အကျင့်ပါနေပြီမှတ်တယ်။
မှားလို့ ပိုတင်မိပြန်ပြီ။ အဘဖောပြောတာ ၁၈ သိန်းရယ်။
အဘဖော ပြောထားပြီလား. လိုက်ရှာလိုက်အုံးမယ်. ကျေးဇူး
ဒီပို့မှာ ဘဖော တွက်ပြထားပါတယ် သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၈ ) မှာအဘဖောအကုန်ပြောပြီးပြီ။
၈၈မတိုင်ခင်က ၈.၄ဘီလျံနောက်နှစ်ပိုင်း ၂.၆ဘီလျံပါတဲ့ဗျာ
အသေးစိတ်သိချင်ယင်( http://www.bbc.co.uk/burmese/burma/2012/02/120202_burma_debt.shtml )
အားလုံးလိုလို.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်မှုအောက်ရောက်သွားနေကြတယ်လို့.. မြင်မိတယ်..။
အပြင်ရောက်နေသူတွေကသာ.. အလှမ်းဝေးနေလို့.. မသိသာသေးတာလို့ထင်တာပါပဲ…။
Win-win game လို့ ပြောချင်တာပါ…။
မှန် ပါ့ မှန်ပါ့
ဒီနေရာမှာ သဂျီးပြောတာကို ၁၀၀% ထောက်ခံပါတယ်။
”ကျနော်လိုချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်က အင်္ဂလန်နိုင်ငံ နဲ့သြစတျေးလျနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးစနစ်မျိူးကို ဗမာပြည်မှာ ဖြစ်စေချင်တယ်။ နောင်လည်း ဒီလိုဖြစ်လာအောင် လုပ်သွားအုံးမယ်။ ကျိူးစားသွားချင်တယ်လို့ ပြောတာပါ။”
ကဲပြောနေကြာသေး။ ချကွာချချ။ အဲဒီနိုင်ငံရေးစနစ်ကဘယ်လိုတုန်း။ ဘယ်လောက်ကြာအောင် တည်ဆောက်ခဲ့ရသတုံး။ ကဲပြောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြော။ လိုက်လုပ်မယ်လေ။ ကြာသလားလို့။ ကိုဘုန်းကျော်အရင်ချ။ ပြီးရင်နောက်ကလိုက်ချမယ်။ ဒီကလွှတ်တော်ကိုအရင်ဖျက်။ လွှတ်တော်အမတ်တွေအကုန်ထုပ်။ အဲဒီကလွှတ်တော်အမတ်တွေခေါ်ချလာ။ ပြီးရင်သူတို့ကိုလုပ်ခိုင်း။ ကဲကိုင်းကိုဘုန်းကျော်ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ရော။ မြန်မှမြန်။
ရှေးအစဉ်အလာအရ နိုင်တဲ့သူကဘုရင် ရှုံးတဲ့သူကသူပုန်ပါဘဲ..
သူပုန်ကတော့ ဘုရင်ကိုနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားမှာဘဲ…
ဘုရင်ကရော ဒီလိုပါဘဲ သူပုန်ကိုနှိပ်ကွပ်မှာဘဲလေ…
ဘယ်ခေတ်မှာမဆို ပြည်သူပြည်သားတွေကတော့ မြေဇာပင်ပါဘဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ မတူပါဘူး..
ငါကတော့ သူဟာ အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတစ်ယောက် လို့မြင်တယ်..
ဘုန်းကျော်…မင်းကတော့ မင်းအပိုင်းပေါ့ …
တိုင်းခန်းမက နန်းကြီးသုတ်ကို မင်းသတိရရင်တောင်မှ
အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါတွေက …
အေးဗျာ။ တိုင်းခန်းမကိုတော့ သတိရတယ်။ နန်းကြီးသုပ်များ ရှိသေလား။ မတွက်တက်လို့ ရမ်းသမ်းတွက်မိတာ။ အဘဖောတော့ ဘယ်လို တွက်လဲမသိဘူး။ နည်းလေးဘာလေးရှိရင်ပေးပါအုံး။
၀ုတ်တယ် ချကြမယ်..ခညားကို ထောက်ခံတယ်.
ခညားပြောမှပဲ မြန်မာငပိန်လေး ဘ၀ကိုမတင်းတိမ်တော့ဘူး
ဒီဒေါ့ကာ..ခညားအရင် သြဇီကနေ ရေကူးပြီးပြန်လာခဲ့..
ပြီးတော့ခညားက လွှတ်တော်အကြောင်းကို အတော်သိပုံရတယ်..
သဘောကျရင်ခညားနဲ့ပူးပေါင်းမယ်.. ဒီမှာ အမတ်မင်းလုပ်စားရတာကိုက်ဘူးဗျ..
(အခုအနေအထားအရ မြန်မာပြည်လွှတ်တော်နဲ့ အင်္ဂလန်ပါလီမန်ကိုယှဉ်ရင် ဆီနဲ့ ရေ၊ မိုးနဲ့ မြေကြီးပဲ။)
ခုရေတွင်းတူး ခုရေကြည်သောက်ချင်လို့ ဘယ်ရနိုင်မလဲဗျာ…
အရေးထဲမှာ တိုင်းပြည်အတွက်ပြင်ပထွက် လုပ်နေသူတွေက အင်ဂျီအိုတွေ ထောက်ပံ့ငွေနဲ့..
ထင်ရာစိုင်းနေကြတော့ ( တနေ့က မဟာမိတ်ညီအကိုဆိုတဲ့ပို့စ်မှာ ကိုဘုန်းကျော်ရေးပြမှသိရတာပါ) ပိုဆိုးတာပေါ့…ပြည်သူတွေကတော့ အပြင်ကဆိုပိုလုပ် နိုင်မှာလား..ဆိုပီး မျှော်လို့..သူတို့ကတော့…….
ကဲကြည့်ကြပါ အရပ်ကတို့….ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအ တွက်..ဆောင်ရွက်နေကြတာ..ပှော်စရာကြီး…
အပြည့်အစုံ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် ကိုဘုန်ကျော်တို့ ပြည်သူ့အတွက်ဘယ်လောက် လုပ်ခဲ့ကြတယ်
ကျွန်တော်က ချချင်နေတာ ကြာပြီ။
ရှေ့က သွားမယ့်သူ လိုနေတာ။
အဲဒီတော့ ကိုဘုန်းကျော် ခင်ဗျား ရှေ့ကနေ ဦးဆောင်ရအောင် အရင်ပြန်လာခဲ့လိုက်။
ရေကူးပြီး မပြန်ခဲ့နဲ့။ လေယာဉ်နဲ့ဘဲ ပြန်ခဲ့ပါအုံး။
ခင်ဗျား မြန်မာနိုင်ငံထဲကို ပြန်ရောက်လာတာနဲ့တင် ခင်ဗျားကို ခေါင်းဆောင်တင်မယ်။
အခုလို အပြင်ကနေပြီးတော့ အော်မနေနဲ့ဗျာ။ ဒါဗြဲ။
တစ်ပိဿာနဲ့ လူတွေအများကြီးပါ။ကိုယ့်အရပ်နဲ့ ကိုယ့်ဇာတ်ပါဗျာ။
“”ခင်ဗျားတို့ တော့ မသိဘူး။ ကျနော်လိုချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်က အင်္ဂလန်နိုင်ငံ နဲ့သြစတျေးလျနိုင်ငံက
နိုင်ငံရေးစနစ်မျိူးကို ဗမာပြည်မှာ ဖြစ်စေချင်တယ်။ နောင်လည်း ဒီလိုဖြစ်လာအောင် လုပ်သွားအုံးမယ်။
ကျိူးစားသွားချင်တယ်လို့ ပြောတာပါ။အခုအနေအထားအရ မြန်မာပြည်လွှတ်တော်နဲ့ အင်္ဂလန်ပါလီမန်
ကိုယှဉ်ရင် ဆီနဲ့ ရေ၊ မိုးနဲ့ မြေကြီးပဲ။”
ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ မှတိုင်းတာစရာမလိုပါဘူး။ဒီမိုကရေစီအစစ်အမှန်ရဖို့ နဲ့ ဥပဒေစိုးမိုးဖို့ အဓိကပါဘဲဗျာ။
သာကူးတွေ၊ပါလေရာငပိချက်တွေ မြောင်းထဲရောက်ပြီး ထောင်နန်းစံ၊အပယ်ခံဘဝရောက်ဖို့ ဘဲ
၁။ အခြေခံဥပဒေ ၂ဝဝ၈ ကို ဘယ်သူရေးတာလဲ။ တရားရဲ့ လား။ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ အတည်ပြုခဲ့လဲ။
၂။ ၂ဝ၁ဝ-ရွေးကောက်ပွဲကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး နိုင်ခဲ့လဲ။ သိရဲ့ လား။
၃။ ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ကို သုံးခဲ့ဘူးလား။
၄။ ဒီနေ့ သုံးတဲ့ စနစ်က ကိုယ့်ပြည်သူတွေ လိုလားနေတဲ့စနစ်လား။
၅။ အင်ဒိုနီးရှားကို မကြည့်နဲ့ ။ သူတို့ တောင် လူကြားတိုးရဲ့ လား။ ချမ်းသာလာပြီလား။
၆။ ဘာ့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဘိုအေးကြီးတွေရဲ့ အတုကို မယူရဲတာလဲ။
မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့ ဗဟုသုတမရှိ မမြင်ဘူးမတွေ့ ဘူး မနာလိုစိတ်များတဲ့ ပညာမတက်တောသားများ ဖြေပေးကြပါ။
၁။ သိတယ်။ ရှင်တယောက်ထဲပဲသိတာမဟုတ်ဘူး။ အားမတန်လို့မာန်လျော့နေရတာ။ အပြင်မှာနေပြီးဘာမှမသိပဲနဲ့ပေါက်ကရအော်မနေနဲ့။ သိချင်ရင်ပြန်ဝင်ခဲ့။
၂။ ဒါလဲသိတယ်။ ပြောပြီးသားထပ်မပြောဘူး။ နိုင်ငံထဲကလူတွေကိုငတုံးတွေလို့ထင်ရင်မှားမယ်။ ပြန်လာခဲ့။
၃။ သုံးနိုင်အောင်လို့ပြည်တွင်းထဲကလူတွေကိုယ်တိုင်ကြိုးစားနေတယ်။ မသိရင်လဲမသိသလိုနေ။ သိချင်ရင်ပြန်လာခဲ့။
၄။ မဟုတ်လို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောပြီးပြီ။ ထပ်ထပ်ပြောနေရတာပဲ။ ဂွကျလိုက်တာ။ သိချင်ရင်ပြန်လာခဲ့။
၅။ ယူနေတယ်။ ယူနေတယ်။ လာကြည့်။ လာကြည့်။ ကိုယ်နိုင်ငံထဲအလည်အပတ်တောင်ပြန်မ၀င် ရဲဘဲနဲ့အပြင်ကနေဘာမှန်းမသိညာမှန်းမသိစွတ်အော်နေတယ်။ သိချင်ရင်ပြန်လာခဲ့။
၅။ မကြည့်ပါဘူး။ ဘာလို့ကြည့်ရမှာလဲ။ ဘယ်သူကကြည့်နေလို့လဲ။ ရှင်ပဲကြည့်နေ တာမဟုတ်လား။
၆။ ယူနေတယ်။ ယူနေတယ်။ လာကြည့်။ လာကြည့်။ ကိုယ်နိုင်ငံထဲအလည်အ ပတ်တောင်ပြန်မ၀င် ရဲဘဲနဲ့အပြင်ကနေဘာမှန်းမသိညာမှန်းမသိစွတ်အော်နေတယ်။ သိချင်ရင်ပြန်လာခဲ့။
ယုံကြည်ချက်နဲ့ နိူင်ငံရေးလုပ်ဖို့တောခိုတာမဟုတ်ဘဲ အော်စီဝင်ဖို့ဒုက္ခသည်ယောင်ဆောင်တဲ့ဆရာရယ်
ရူးကြောင်ကြောင်နဲ့ဟိုလူရမ်း ဒီလူရမ်းတွေ လုပ်တာကိုယ့် လူလဲစိတ်ပင်ပန်းပါလိမ့်မယ် ဒါမှမဟုတ် အီရန်မှာ သမ္မတ သွားလုပ်ပါလား ပြောချင်ရာပြောလို့ရတယ်လေ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ညစ်တစ်တစ် အပြော အပြုအမူ ဟာ ကြာရင်အကျိုးမဲ့တာဘဲ ရှိပါတယ် ကြွက်လို မြေတွင်းထဲမှာ ရှာမှ ထမင်းစားရတဲ့ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်သိပါစေ